Guta Land River - Gadzirisa dzose tsamba kubva AZ online
Kutamba guta guta rwizi
Iko mapepa anopiwa sei muGuta Land River?
Zviratidzo uye zvigadziriswa zveguta reguta rwizi
Guta Land River zvikwata zvine mhinduro dzakarongwa
Mitemo yeGuta Land River iri nyore uye inokurumidza kutsanangura: kukwanisa kutamba guta, nyika, rwizi rwaunoda 2 kana vamwe vatambi. Mutambi mumwe nomumwe anoda pepa risina chinhu repepa reDINA-4 nepeni.
Guta nyika mitemo mitambo yemutambo
Pamusoro pepepa, vatambi vanogadzira tafura. Mashoko echimiro akanyorwa pamusoro petafura.
Inotanga neguta, nyika, rwizi uyezve dzimwe nyaya dzakadai semiti, basa, mhuka kana kunyange nyaya dzisina kujairika dzakadai sekudya, kunwa, motokari, mukurumbira, chiridzwa kana mafashoni. Nyaya idzi dzinofanira kukurukurwa mberi kune vamwe vatambi.
Mutambi anotaura zvinyorwa zvinyorwa kubva kuA kusvika kuZ uye mumwe mutambi anofanirwa kuti "Stop" pane imwe nguva. Iye zvino vatambi vose vanofanira kuwana mazwi eboka rinowirirana netsamba yakasarudzwa. Mukuwedzera kune guta, nyika uye rwizi, zvinyorwa zvekare zvinenge zvikara, miti, mazita nemabasa.
Pasi pepaji ino, tinopa sarudzo dzezvimwe nyaya dzisinganzwisisiki dzakadai semidziyo kana mimhanzi.
Uyo akatanga kuzadza pepa racho zvachose anoti "rega" uye vamwe vose vatambi vanofanira kubva vangoisa pasi peni yavo. Iye zvino munhu wekutanga anotanga kuverenga chikamu chokutanga. Maonero emashoko akaparidzwa sezvinotevera.
Kana vanhu vakasiyana vaine shoko rimwe chete, ipapo mumwe nomumwe 5 anotora pfungwa, kana mumwe munhu oga ane shoko, anowana 10 points. Zvisinei, kana mumwe munhu ane shoko rose ari oga muchikwata, 25 inowana pfungwa. Saka rimwe nerimwe rinotevera rinotevera mitezo imwecheteyo. Iko pfungwa inowedzerwa mushure mokutenderera kumativi ose uye pakupedzisira imwe ine pfungwa dzakawanda ndiyo inokunda.
Zano kubva pakuita: Mhombwe dzimwe nguva dzinowanikwa pakati pevatambi kana mumwe munhu anenge adyorera, kuitira kuti ave nokukurumidza, nyora mazwi asingagoni kuverengeka pamatombo avo. Sezvo iwe unogona kubvumirana seguta renyika rwizi rinotonga kuti vanhu vatatu vanofanira kunge vachikwanisawo kuverenga mazwi kuti ave nemhinduro yakarurama.
Matura ekudzivirira nekudhinda zvemutambo wako unotevera
Guta renyika rwizi cheater zvinyorwa zvekare
Guta Land River Cheater zvimwe zvinyorwa
Guta land river river solutions cars
Guta Country River Solutions mhemberero
City Land River Solutions Mafirimu
Guta renyika rwizi zvinogadzirisa zviridzwa
Guta renyika rwizi migwagwa yenyika
Guta renyika river river solutions marita mavara
Guta Land River Solutions Maguta
Guta Land River Solutions Doro
Guta land river river solutions tools
Gummitwist play | Shandisa nguva yakawanda